ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြframနာတစ်ရပ်အဖြစ်ကျန်းမာရေးပညာရေး၏အခန်းကဏ္: - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည့်ဒေသတွင်းနှင့်အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာများ (၂၀၀၈) - Your Brain On Porn
Education မြှင့်တင်ရေး။ 2008;15(1):11-8. Doi: 10.1177 / 1025382307088093 ။
Perrin PC ကို, Madanat HN, Barnes က MD, Carolan တစ်ဦးက, Clark က RB, Ivins N ကို, Tuttle SR, Vogeler HA, Williams က PN.
၏ကို Johns Hopkins Bloomberg သတင်းဌာနကကျောင်း ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး, Baltimore, MD, USA ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြissueနာဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင်အပြာစာပေရုပ်ပုံများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီမှုကြေညာချက်တစ်ခုရောက်ရှိပြီးချိန် မှစ၍ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြwithနာကိုကိုင်တွယ်ရန်အတွက်မူဝါဒဆိုင်ရာအရေးယူမှုအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်းထန်သောဆွေးနွေးမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုသည်တစ် ဦး ချင်းအခွင့်အရေးများအကြားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အစွန်းရောက်ခြင်းနှင့်လူ့အသိုင်းအ ၀ န်း၏အကျိုးစီးပွားအတွက်အပြည့်အ ၀ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခြင်းအပေါ် ဆက်လက်၍ တိုးချဲ့ထားသည်။ သို့သော်ဤကာလအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤစာတမ်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအမျိုးသမီးများ၊ ကလေးသူငယ်များနှင့်စားသုံးသူများအပါအ ၀ င်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်သည့်လက်ရှိနှင့်ပျက်ကွက်သောမူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခြင်းကိုအဓိကထားသည်။ ကြီးထွားလာနေသောအင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုနက်နက်နဲနဲဆွေးနွေးပြီးအင်တာနက်အပြာစာပေနှင့်ပတ်သတ်သောသီးခြားမူဝါဒအကြံဥာဏ်များကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှတင်ပြသည်။
အဆိုပါသုတေသနညစ်ညမ်း Perrin et al (ထိုကဲ့သို့သောလိင်စိတ်နိုးထ (Schneider, 2006) အတွက်အင်တာနက်မိဘများ '' compulsive အသုံးပြုမှုအဖြစ်ကလေးများ (Manning, 2003), နှင့်မိသားစုဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးအပေါ်ရှိစေခြင်းငှါသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုများစွာဖော်ပြထားခဲ့သည်။ , 2008; Schneider, 2003) ။